माउरिज्यो क्याटालान, मूर्तिकार
अन्तर्वार्ता: थिबौट वाचोवानोक/अनुवाद: सुरज सुवेदी
१९९० दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती कमाउने थोरै इटालियन कलाकारमध्ये उनी पनि पर्छन्। जसको प्रतिष्ठा त्यसपछि पनि बढिनैरह्यो। संसारका चर्चित र प्रतिष्ठित संग्राहलयमा उनले आफ्नो एकल प्रदर्शनी गरिसकेका छन् जसमा न्यु योर्कको ‘म्युजियम अफ मोर्डन आर्ट’ र लस एन्जलसको ‘म्युजियम अफ कन्टेम्पोररी आर्ट’ पनि पर्छन्।
उनी भेनिस बियानालेका पाँचवटा शृंखलामा सहभागी भइसकेका छन् र रोयल एकेडेमी अफ लण्डनको ‘ह्वाइटने बियानाल मेनोफेस्टा’ र ‘अपाकलिक्स’ जस्ता अरू धेरै सामूहिक प्रदर्शनीमा प्रस्तुत भइसकेका छन्। उनी भन्छन् ‘म अरू मान्छेहरु के भन्छन् भन्ने सुन्न मन पराउँछु। अरू नभए, उनीहरूको बिचार नभए, उनीहरूको कथा नभए कोही कलाकार पनि अस्तित्वमा हुँदैन न तिनको कामनै। त्यसैले कलाकारले आफूलाई भन्दा धेरै अरूलाई सुन्नुपर्छ।
अवकास लिएको भनेर घोषणा गरेको ५ वर्षपछि उनै क्याटालान आफ्ना ‘मास्टरपिस’सहित ‘मोने डे पेरिस’ मा प्रस्तुत भए। उनका धेरैजसो ‘मास्टरपिस’ विवादास्पद छन्। त्यसको बारेमा उनी के भन्छन् त? थिबौट वाचोवानोकले उनीसँग गरेको जम्काभेट हामीले यहाँ सुरज सुवेदीको अनुवादमा प्रस्तुत गरेका छौं।
‘मोने डे पेरिस’ प्रस्तुतीका लागि आफ्ना काम छान्दै गर्दा कुन मापदण्ड राख्नुभयो?
प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार केही मुख्य कामहरूमात्र यसपल्ट देखाइएको छ। कसैले आफ्नो काम ‘मुख्य’ भनेर कसरी निर्णय गर्छ?
यदि नियमनै भन्ने हो भने ‘दि थ्रि जेनेरेसन्स’ हुन सक्छ। कुनै पनि कला तीनवटा अवस्था हुँदै गुज्रिन्छन्। पहिलो आकर्षण, दोस्रो गिरावट र तेस्रो ‘कमब्याक’को अवस्था। र, यदि कुनै काम तेस्रो पुस्ता सम्म बाँच्छ भने त्यसलाई मुख्य काम वा ‘मास्टरपिस’ भन्न सकिन्छ। ८० को दशकका ‘मास्टरपिस’ के थिए भनेर अहिले हामी भन्न सक्छौं तर त्यसभन्दा अगाडि जानु भनेको भ्रम छर्नु मात्र हो। लामो अवधिको परिप्रेक्ष्यबाट अध्ययन गरेपछिमात्र कुनै कलासँग मिडियामा पाएको महत्त्व र एतिहासिक सान्दर्भिकताबीच सही संयोजन छ भन्न सक्छौ। त्यसैले कला भनेको अनावश्यक प्रचार मात्र हैन।
हो सबै प्रदर्शनी कला नहुन सक्लान्। सबै कलाकार त्यसको रक्षक पनि नहोलान्। तर प्रदर्शनी आफैंमा कला हुन सक्छ। फिलिपे पारेनोले ह्याङ्गर बिकोकामा गरेको एकल प्रदर्शनीलाईनै सोच्नुहोस् न। पत्रिकामा त यसलाई उनका पुराना कामहरूको प्रदर्शनी मात्र भनेर लेखियो तर त्यसको नतिजा स्पष्ट फरक आयो। यो प्रदर्शनी मात्र नभएर उत्कृष्ट पुराना कामहरूको संयोजनमा बनेको ‘ब्राण्ड न्यु’ काम भइदियो। यस्ता घटनाहरू भइदिन्छन् जहाँ पूर्णता आफैंमा टुक्राहरूको जोडभन्दा धेरै अग्लो भइदिन्छ।
‘मोने डे पेरिस’ मा राखिएका कामहरूले आपसमा संवाद कसरी गर्छन्?
‘नट अफ्रेड अफ लभ’ नामको शीर्षक किन छान्नुभयो?
तर मृत्युको भाव भने सबैतिर आएको देखिन्छ। त्यसको विकल्प शीर्षक ‘नट अफ्रेड अफ डेथ’ हुन सक्छ कि सक्दैन?
मेरो लागि वास्तविक प्रश्न जहिल्यै पनि ‘के मृत्यु भन्दा पहिला जीवन हुन सक्छ?’ भन्ने रह्यो। मृत्युसँग मलाई डर लाग्नुको कारण मेरो वरपर भएका मानिसहरू जे सँग पनि डराइरहेकाले हो। हरेक दुखलाई देखाउन सकिन्छ जबसम्म तिनीहरूमा अर्थ भइरहन्छ।
जब हामी तपाईंको चर्चित कला हेर्छौं, उदाहरणको लागि ‘ला नोना ओरा’ अथवा ‘हिम’। जुन सन्दर्भ र प्रसंगबाट तिनलाई ल्याइएको त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। तर के हामी तपाईंको कलालाई कुनै अनुभवहीन आँखाले हेर्न सक्छौ? जुन सन्दर्भमा तिनलाई बनाइएको थियो के ती अहिले पनि कलाको एक पाटो हुन्? त्यो पाटोसँग कत्तिको खेल्नुहुन्छ?
कलाको काम भनेको प्रश्न सोध्नु हो उत्तर दिनु हैन। र यदि तपाईं स्पष्ट जवाफ खोज्नुहुन्छ भने गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ। एउटा किताब, म्यागजिन, वा फिल्म – जसमा तपाईंले देख्ने भनेको भन्न नसकिने आफ्नै ‘इगो’ हो। तिनीहरूले कलाकार को हो भन्दा पनि तपाईं को हो भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्छन्।
तपाईंको काममा ‘क्याथर्टिक र लिभरेटिङ इफेक्ट’ हुन्छन्। तिनीहरूलाई लगभग मनोबिष्लेषणात्मक ढंगबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अमेरिकनहरु ‘राजकीय’ शब्दसँग पागल भएको कुराले मेरो ध्यान खिचेको छ। ब्रिटेनबाट स्वन्त्र भए पनि उनीहरूमा राज परिवारको कुनै नोस्टालजिया बाँकी भएको जस्तो लाग्छ। मैले बिचार गरेको छु बेलायतमा भन्दा अमेरिकामा ‘रोयल’ लेखिएका लगाइएका सामाग्रीहरू बढी बिक्री हुन्छन्। यहाँसम्म कि ट्वाइलेट पेपर पनि। मलाई लाग्छ कुनै न कुनै तहमा यी सत्यहरू गाँसिएका छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १६, २०७४ ०९:५०:१७